को हुन् क्रिसमसमा चर्चा गरिने शान्ता क्लस ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
को हुन् क्रिसमसमा चर्चा गरिने शान्ता क्लस ?
८ पुष २०७८, बिहीबार १२:५५
काठमाडौं – क्रिसमस आउन अब दुई दिन बाँकी छ । क्रिस्चियनहरूको सर्वाधिक ठुलो चाड क्रिसमस नेपालमा पनि मनाइन्छ ।
क्रिसमसका बेलामा क्रिस्चियनहरूमा शान्ता क्लसको चर्चा हुन्छ । विशेष गरी बच्चाहरूले शान्ता क्लसलाई मन पराउँछन् । तर धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ, शान्ता क्लस को हुन् अनि क्रिसमससँग उनको के सम्बन्ध छ ?
क्रिस्चियन धर्मालम्बीहरूको विश्वासमा शान्ता क्लस भगवानले पठाएका दूत हुन् । कतिपय भने शान्ता क्लस येशुका पिता हुन् भनी मान्दछन् । त्यसैले उनी आफ्नो छोराको जन्मदिनमा बच्चाहरूका लागि उपहार दिन आउने धार्मिक मान्यता छ ।
खेलौना लिएर आउने भएकाले शान्ता क्लसलाई बच्चाहरूले मन पराएका हुन् । सेतो धर्काको बोर्डर भएको रातो रंगको कपडा लगाएर जिंगल बेल गीत गाउँदै आउने वृद्ध व्यक्ति शान्ता क्लस हुन् । उनको सेतो लामो दाह्री हुन्छ ।
पहिले पहिले शान्ता र क्रिसमससँग सम्बन्ध थिएन । पछि तुर्किस्तानको मीरा नामक शहरमा सन्त निकोलासको नामबाट शान्ता क्लसको नाम राखिएको मान्यता छ । इसाको चौथो शताब्दीमा शान्ता क्लस प्रचलनमा आयो । उनको भेष धरेर सन्तहरूले गरिब र असहाय बच्चाहरूलाई उपहार दिने गर्थे । अचेल शान्ता क्लस बिनाको क्रिसमसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द
आज हरि बोधिनी एकादशी, उपत्यकाका चार नारायणमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड